December 2019 | Save A tareenka
filimada Harry Potter ahaayeen ugu taxane film guul waqtiga oo dhan. Many of the scenes from the Harry Potter films were shot within London itself. Whether you are a die hard fan of the Harry Potter movie or book series, London is undoubtedly the…
Europe, dalka quruxda badan ee quruxda iyo cirfiid warkii shaki la'aan waa go a in caga for enthusiast kasta safarka halkaas. Iyada oo meelo baraaruga baqeen limitless booqashada, Europe waxaa lagu yaqaan in ay noqon mid ka mid ah xarumaha qurux waxbarasho dibadda ee ardayda International intii…
Europe ayaa soo jiidashada a jiilaalka qaarkood bilaha qabow in qaar ka duwan meesha kasta oo dunida ah. Waxaa jira wax badan oo kala duwan, iyo laba ma aha meelaha leeyihiin dareen isku mid ah iyo jawi. Dhab ahaan, dad badan ayaa sheegaya in magaalooyin iyo tuulooyin inta lagu guda jiro…
Bal qiyaas hoos fadhiya inay ku raaxaystaan ​​kafeega subaxdii aad ku sugnaan naqshadaha dhaqanka Talyaani halka raadinayaa at biyo buluug dhalaalayay oo buuraha cagaaran luscious. Iyada oo ay tani u muuqan yaabaa in sida kaliya riyo, waa mid dhab ah in kuwa booqo cajiib Lake Como. Tani waxay lamid ah…
Milan si Rome By tareenka ama Rome si Milan waa waayo-aragnimo fudud oo hufan. In aan ku xuso qurux badan! Waad qaadan kartaa tareen ka jaban kaasoo qaadan kara waqti ka dheer 3 hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at…
gobolka of Normandy waxaa ku yaalla qaybta galbeed ee France iyo waa safar gaaban ka Paris iska. Waa meel safarka caan ah oo badan oo doonaya in ay la kulmaan nuxurka Waqooyiga France. Normandy waxa uu leeyahay oo dhan, ka…
Europe waxaa ka buuxa qaar ka mid ah Waddooyinka Most Beautiful. From ugu qatarsanaa oo midabo si aan caadi ahayn u. Qaar ka mid ah Most Beautiful Waddooyinka In Europe waxaa hore u helay oo si fiican u habaysan on track dalxiiska, laakiin kuwo kale ay dhab qarsoon GEMS in kaliya…
mar aad rumaysan karo ku dhawaad ​​waqti in ee sannadka? Waa markii ugu quruxda badan ee sannadka! Run ahaantii aad u hesho galay ruuxa la Best ee Suuqyada Christmas ee Germany! Laga soo bilaabo dhammaadkii November ilaa Christmas Eve, wareegga ah ee magaalooyinka oo dhan Germany waa cunnaha…